Foshan SitZone Furniture Co., Ltd. yasekwa ngo-2009, i umenzi ifanitshala ngokukodwa izitulo ofisi kunye sofas.
Le nkampani kusekelwe ifenitshala China kunye nezinto idolophu ephambili --- Longjiang, Shunde, Xa ngokusebenzisa izinto zasekuhlaleni ekrwada kunye nemithombo yabantu, iadvanteji, inkampani yethu igxininisa esitulweni ofisi thina zibekho kakhulu. Ngegunya professional Ngu umoya abalwela igqibelela umthengi-phambili sengqondo ngenkonzo elungileyo, siye saseka waziwa kakuhle Industry enye, kwaye kukho inzuzo ecacileyo ukukhuphisana umlinganiselo wentsebenzo ixabiso imveliso.
Ekubeni inkampani yasekwa, Sitzone likhula ngokukhawuleza enoba kule inkalo amandla emveliso okanye iitalente. Phantsi ndawo yokulawula ngokungqongqo umgangatho. Sinikeza abaxumi bethu kunye ogqibeleleyo emva kwenkonzo kwentengiso. Kwangaxeshanye, siza kuqhubeka ukuphuhlisa intsimi yoyilo, ukuba ubuchule entsha nangamandla kwiimveliso zethu.
SitZone Furniture uya kuqhubeka ngqo le ingqiqo ulawulo ukugcina siqhubekele phambili, inkonzo ngokunyaniseka, ukuze inkonzo yethu umthengi ngamnye kunye partner.We zentsebenziswano ndamkele abahlobo ukusuka ekhaya nakwihlabathi jikelele ukutyelela uze uxoxe kunye us.We sijonge phambili ekusekeni intsebenziswano ixesha elide macala yingenelo yaye unyanisekile yaye ndonwabile kunye nawe!